Ingabe Kufanele Uphawule Imidiya Yakho Eyabiwe? | Martech Zone
Ingabe Kufanele Uphawule Imidiya Yakho Eyabiwe?
Sisebenza nezinkampani eziningi zobuchwepheshe bokumaketha ukuthuthukisa okuqukethwe okujulile nokucwaninga nge-infographics, amaphepha amhlophe, amavidiyo kanye namasu abo wokumaketha okuqukethwe wonkana. Ngokwengxenye enkulu, sihlala sizama ukusebenzisa amandla ohlobo lwabo. Kubalulekile ukuba nezwi nokubonwayo kuhlotshaniswe nenkampani noma imikhiqizo noma izinsiza zayo kulokho okusabalalisayo.
Kulula, umkhiqizo wakho yilokho okucatshangwa yithemba lakho lapho ezwa igama lakho lomkhiqizo. Yikho konke umphakathi ocabanga ukuthi uyakwazi mayelana nokunikezwa komkhiqizo ngegama lakho — kokubili okuyiqiniso (isib. Kufika ebhokisini le-robin-egg-blue), nangokomzwelo (isb. Kuyathandana). Igama lakho lomkhiqizo likhona ngokusobala; abantu bangayibona. Ilungisiwe. Kepha umkhiqizo wakho ukhona kuphela engqondweni yothile. UJerry McLaughlin, Uyini uMkhiqizo, noma kunjalo?
Ngezinye izikhathi, sikhetha ukuphuma ekufakeni uphawu lwemikhiqizo yabo esatshalaliswa. Imvamisa kulapho sithuthukisa i-infographics. Imidiya esatshalalisiwe efana namaphepha amhlophe kanye ne-infographics inethuba elikhulu kakhulu lokwabiwa kumasayithi wonke. Lapho zivela njengesikhangiso esisodwa esikhulu, noma kunjalo, kulimaza amathuba okuba lokho okuqukethwe kwabelwane ngakho. Udinga ukunquma ukuthi uqine kangakanani ukufaka uphawu lomkhiqizo kokuqukethwe kwakho okusatshalalisiwe nokuthi kuzolimaza ikhono lakho lokwabiwa.
Njengesibonelo, sisebenze kwifayela le- uchungechunge lwe-infographics lohlu luka-Angie. Uhlu luka-Angie lunomkhiqizo othembeke ngokumangazayo futhi onamandla ngaphakathi nangaphandle kwewebhu ukuthi ukusebenzisa uhlobo lwabo lomkhiqizo bekungasizi ngalutho. Abantu bazojwayela ukwabelana ngokuqukethwe ngoba nje kuthenjiwe futhi kuyabonakala. Bheka a Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwamazinyo futhi Umhlahlandlela Wonyaka Wesizini Wokunakekelwa Kwendawo Nokunakekelwa Kotshani. Sisebenzise ukufaka uphawu ku-Angie's Listing, isitayela kanye nelogo kuyo yonke imininingwane ye-infographics:
Ngezinye izikhathi, sisebenze nezinkampani ezazingaziwa kakhulu futhi zazingenalo uphawu oluqinile, ngakho-ke sagxila endabeni engemuva kwesiqeshana kunokuba uphawu lwenkampani luqhamuke ne-infographic enamandla kakhulu eyaphumelela, yabiwa kabanzi, futhi kuholele umsebenzisi ekhasini lokufika lapho abangagxila khona kundaba kunenkampani. Sisebenzise ngisho netimu ye-Halloween ngoba i-infographic ibekelwe isikhathi nge-Halloween!
Ukugxila kwethu kokugcina bekuwukuthola ukuthi isihloko sisatshalaliswe ngaphandle ukufaka uphawu okunamandla okungenza abashicileli abaku-inthanethi babe manqikanqika ngokwabelana nge-infographic. Futhi kwasebenza!
Noma kunjalo, kwezinye izikhathi, sicindezele uchungechunge lwe-infographics ebelunophawu oluqinile kusayithi leklayenti kepha hhayi ukukhangisa ngokweqile ngalo mkhiqizo. Besifuna uchungechunge lwe-infographic lwakha igunya embonini yabo buthule ukuze abashicileli babelane nabezindaba futhi bangaboni ukuthi babenophawu oluqinile… kubukeka sengathi bonke banesitayela esifanayo. Nge-infographic ngayinye, ukusatshalaliswa kukhulisiwe. Ngeshwa, iklayenti (ngephutha) laphinde labuya ngemuva kokusishiya futhi lalahlekelwa ngumfutho owawakhiwe ngakho angizukubukisa ngalo.
Kuleli qhinga lesikhathi eside, inhloso yethu bekuwukuthi le nkampani ibonakale njenge- umthombo wobuchwepheshe ngaphakathi kwemboni yabo. Ngamanye amagama - besisebenzisa i-infographics ukwenza ukwakha brand yabo, hhayi ukugxila kuyo.
Uyifaka kanjani uphawu kwimidiya yakho ehanjisiwe ingaba nomthelela omkhulu ekhonweni layo lokwabiwa. Ukubeka uphawu okuqinile kungavala abashicileli abaku-inthanethi - ngaphandle kokuqina kwevidiyo, i-infographic noma iphepha elimhlophe. Sifakwa nsuku zonke kuma-infographics embonini yezentengiso - futhi sivame ukwenqaba lezo zibonelo lapho empeleni kuyisikhangiso esikhulu. Abashicileli abafuni ukukhangisa kwakho, bafuna ukusebenzisa imidiya enhle oyithuthukisile ukwakha inani ngezithameli zabo. Yiba ngamabomu ekujuleni kophawu olisebenzisayo lapho uthuthukisa okuqukethwe kwakho.
Tags: brandi-infographics enophawubasakaza imidiyaI-Marketing InfographicsAmavidiyo Wokumakethaokungewona umkhiqizoi-infographics engenalo uphawukwabelwane ngemidiyawhitepapers
Luthini uhlelo lweNet Promoter Score (NPS)?